विद्यार्थी भर्ना अभियान : कहिल्यै हुँदैनन् शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
Posted by Milap Subedi | ९ बैशाख २०७४, शनिबार १७:३१ |
बैशाख ९,तेह्रथुम – नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै जिल्लाभर यो सातादेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान चलिरहेको छ । हरेक शैक्षिक सत्रमा जस्तै यो वर्ष पनि विद्यालय भर्ना हुन छुटेका बालबालिकालाई खोजी-खोजी विद्यालय भर्ना गराउने सरकारी अभियान छ ।
तर वर्षेनी आउने तथ्यांकमा शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना भएको पाइँदैन ।
यो वर्ष पनि जिल्लामा शिक्षा कार्यालयले विद्यालय भर्ना हुन बाँकी रहेका सबै बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय भर्ना गराउन अनुरोध गरेको छ ।
गएको वर्ष जिल्लामा ३ दशमलव ५ प्रतिशत विद्यालय उमेरका बालबालिका विद्यालय बाहिर थिए ।
तर विद्यालय भर्ना छुटेका बालबालिका खोजी गर्दा गाउँमा कतै पनि विद्यालय भर्ना नभएका विद्यालय उमेरका बालबालिका नपाइने गरेको शिक्षकहरुले बताएका छन् ।
तथ्यांकमा देखिए बमोजिम ३ दशमलव ५ प्रतिशत विद्यालय भर्ना छुटेका बालबालिका खोज्न यतिवेला जिल्ला शिक्षा अधिकारी कृष्णप्रसाद पोखरेलदेखि गाउँ–गाउँमा शिक्षक र सरोकारवालाहरु लागेका छन् ।
‘बस्तीस्तरमा घर दैलो कार्यक्रम गरेर सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराइन्छ । तर तथ्यांकमा शतप्रतिशत कहिल्यै पुग्दैन’ जिशिअ पोखरेलले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अनुरोध गर्दै भन्नुभयोे, ‘गाउँमा बालबालिका पनि छैनन् । आखिर कहाँ जान्छन् ती भर्ना छुटेका बालबालिका ? म पनि खोज्दैछु, तपाईहरुले पनि खोजिदिनुपर्‍यो ।’
जिल्ला शिक्षा अधिकारी पोखरेलले पछिल्लो झण्डै ६ महिनामा जिल्लाभरका ४० बढी विद्यालयमा आफैँ पुगेर निरीक्षण गरेको भन्दै सबै विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या सन्तोषजनक मात्रै भएको बताए ।
‘विद्यालय भर्ना अभियान सबै विद्यालयले चलाएका छन्, उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या पर्याप्त छैन, त्यसैले शिक्षक र अभिभावक पनि यो अभियानमा हुनुहुन्छ । तर गाउँमा बालबालिका नै छैनन् भन्ने जवाफ छ ।’ जिशिअ पोखरेलले आफूले पनि कही कतै विद्यालय नजाने बालबालिका नदेखेको, नभेटेको बताए ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गएको शैक्षिक सत्रमा जिल्लाभर ९६ दशमलव ५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय भर्ना भए । सो तथ्यांक कक्षा–१ देखि ५ कक्षासम्म भर्ना भएका बालबालिकाको हो । तथ्यांकमा कक्षा–६ देखि ८ सम्म बढीमा १२ बर्ष सम्मका ९५ दशमलव ५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र भर्ना भएको देखिन्छ ।
तथ्यांकमा छुटेका ४ देखि ८ वर्ष उमेरका ३ दशमलव ५ प्रतिशत र ९ देखि १२ वर्ष उमेरका ४ दशमलव ५ प्रतिशत बालबालिका नभेटाएर यतिवेला जिल्लाका सरोकारवाला हैरान छन् । जिल्ला शिक्षाले जिल्लाभर विद्यालय निरीक्षकहरु, शिक्षकहरु र अभिभावकलाई समेत विद्यालय भर्ना अभियान सामेल हुन आग्रह गरेको छ ।
तथ्यांकले वर्षेनि विद्यालय भर्ना अभियान चलाएपनि ३ देखि ४ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिरै भएको देखाउँदा सबैलाई हैरानी भएको जिशिअ पोखरेलले बताए। ‘सधैँ अभियान चलाइएकै छ, गाउँमा बालबालिका छैनन् भन्ने जवाफ छ, म आफैले पनि घुमेर हेर्दा कतै भेटेको छैन, फेरि तथ्यांक किन शतप्रतिशत आउँदैन ? म आफैँ अचम्मित छु,’ जिशिअ पोखरेलले भने ।
विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई भर्ना गराउन जिल्लामा विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरु समेत क्रियाशील छन् । हरेक वर्षको वैशाख महिनाभर विद्यालयहरुले भर्ना अभियान चलाइरहेका छन् ।
ती विद्यालयहरुको अभियानमा जिल्लाका दलित सचेतना समाज, नेपाल र देउराली सोसाइटी नामक गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि सहयोग गरेका छन् । तर बस्तीस्तरमै पुगेर सञ्चालन गरिएका ती अभियानले पनि कहीँ कतै विद्यालय भर्ना नभएका बालबालिका नभेटिएका दलित सचेतना समाज नेपालका निर्देशक कुमार विशंखेले बताए ।
‘सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउन प्रयास सधैँ गरिएको छ, छुटेका बालबालिका कहाँ गए ? भन्ने सन्दर्भमा कि जिशिकाको तथ्यांक गलत छ ? कि बालबालिका नै हराइरहेका होलान्, त्यो खोजको विषय हो’ उनले भने ।
जिल्लामा गएको वर्ष १३ हजार ४ सय ११ छात्र र २५ हजार ५ सय ४४ जना छात्रा गरी जम्मा ३८ हजार ९ सय ५५ जना बालबालिका विद्यालय भर्ना भएका थिए । जिल्लाभर १ सय ८२ वटा आधारभूत, ४६ वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरु छन् ।
यस्तै १६ वटा निजी आधारभूत तथा ७ वटा निजी मावि छन् । सामुदायिक विद्यालय तर्फ जिल्लाभर १ हजार ३ सय ३७ शिक्षक दरबन्दी रहेकामा ४२ वटा दरबन्दी रिक्त छन् । यसवर्ष पनि जिल्लाका दुई नगरपालिका र चार वटै गाउँपालिकामा विद्यालय भर्ना अभियान सुरु भएको छ ।
Previousकाठमाडौँ महानगरपालिकामा नयाँ बन्न सुरु गरेका सबै घरमा नियमित निगरानी
Next‘अहिल्यै सेमेस्टरको लागि त्रिवि पुर्ण तयार भएको छैन’ : नेता यादव
२० फाल्गुन २०७४, आईतवार ०७:४७
१२ कार्तिक २०७४, आईतवार १३:०५
रकम बाँडफाँटको विषयलाई लिएर कार्यालयभित्रै कुटाकुट
१९ फाल्गुन २०७४, शनिबार ०८:४०